HOMI: Alaina ambavany i Erlie nilako ilay avocat
lundi, 03 décembre 2018 22:31
Taorian'ny sakoroka avy nivoaka ny boite de nuit tetsy Antanimena, dia niditra hopitaly etsy amin'ny HOMI i Erlie, ilay miaramila eo anivon'ny primatiora, noho ny tongony voahitsaky ny fiara nentin'i Maître Aliarivelo Maromanana, raha ny filazan'ireto nikasi-tanana azy ireto.
Amin'izao hariva izao dia mbola mitohy ny fakana am-bavany azy.
I Arnaud, rahalahiny kosa dia tazonina eny Fiadanana, efa vita omaly ny fakana ambavany azy, fa ireo vavolombelona sécurité n'ilay boite de nuit, no efa natao fanadihadiana ihany koa, anamarinana raha tena niainga avy tao anaty boite de nuit tokoa ny fifamaliana, ary raha tena mamo tokoa ilay mpisolovava.
Raha ny nambaran'ireto nilako ilay avocat tokoa manko, dia teo ampakana ny basiny, izay napetraka teo ampidiran'ny boite de nuit, nihidiana tanaty coffre, dia nanontany ilay sécurité ny aminn'y antony hitondran'i Erlie basy, ka namaly i Arnaud, izay nitondra vady tamin'io, fa mpiambina eny ami'ny primatiora izy, ka izay no ananany basy eny aminy.
Raha ny filazan'ireto hatrany, dia nitsatsaingoka sy nanopa i Me Aliarivelo, fa tsy misy iraharahiany izany mpiambina primatiora izany. Niezaka nanasaraka ny vadin'i Arnaud, fa raikitra tany ivelany ny totohondro.
Voasaraka ihany anefa ny roa tonta, ka dia samy nandeha nody, tampoka anefa dia nirifatra nanitsy ireto ny fiara nentin'ilay Mpisolovava ka dia voahitsaka ny tongotry Erlie. Niezaka niala moa ry Arnaud mivady ary dia lasa i Maitre, tsy tapitr'izay, fa mbola nanaraka indray ilay Mpisolovava nanitsy an'izy ireo, dia naka vato i Arnaud, ka dia notorahiny ny fitaratry ny fiara ampijanona azy.
Raikitra teo ny famoahana ilay avocat tanaty fiara nihidy, novakian'i Arnaud ny fitaratry ny fiara, ka nivoaka i Me Aliarivelo Maromanana. Nampandohaliandreo teo ambany ity olona nikasa hamono andreo ity, raha ny fitantaran'izy ireo hatrany. Tsy nahatsindry fo moa i Erlie ka dia nilako an'i Me, nisy Polisy tonga teo tamin'izay ary samy mbola niakatr'afo ireo.
Etsy ankilany, dia fantatra fa tsy misy avocat manaiky hiaro an'izy mirahalahy ireto, asa na entin'ny tahotra satria ny Holafitry ny Mpisolovava dia nanao fihetsiketsehana ho fiarovana ity avocat nisakoroka tamindreo ity.
Fantatra ihany koa fa atolotra ny fampanohavana rahampitso amin'ny 10ora maraina, raha tsy misy ny fiovana izy ireto.
Andrasana arak'izany ny fitantaran'i Me Aliarivelo Maromanana ny zava-nisy araky ny niainany azy.
Ny fitsarana hatrany moa no anapaka momba izao raharaha izao.